मोहिनी एकादशी व्रतको कथा - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
मनुष्य सबै पाप तथा दु:खबाट छुटेर मोह जालबाट मुक्त हुन जान्छ । अत: यो व्रत दु:खी मनुष्यले अवश्य गर्नु पर्दछ । यस बाट मनुष्यका सबै पाप र दु:ख नष्ट हुन्छन ।
धर्मराज युधिष्ठिरले सोध्नुभयो कि हे कृष्ण ! वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम के हो तथा त्यसको के कथा छ? यस व्रतको के विधि छ, सो सबै विस्तारपूर्वक बताउनु हवस् ।श्रीकृष्ण भन्न थाल्नुभयो हे धर्मराज ! म तपाईसित एउटा कथा भन्दछु, जसलाई महर्षि वशिष्ठले श्री रामचंद्रसित भन्नु भएको थियो। एक पटक श्री रामचंद्रले भन्नु भयो, हे गुरुदेव ! कुनै यस्तो व्रतको बारेमा बताउनु हवस जसबाट समस्त पाप र दु:ख नष्ट होउन । मैले सीताको वियोगमा असाध्यै दु:ख भोगेको छु अत: कुनै व्रतको विधि आज्ञा गर्नु हवस् ।
महर्षि वशिष्ठले आज्ञा गर्नु भयो, हे राम ! तपाईले अति बहुत सुंदर प्रश्न गर्नु भएको छ । तपाईको बुद्धि अत्यंत शुद्ध र पवित्र छ । यद्यपि तपाईको नामको स्मरण गर्नाले मात्र मनुष्य पवित्र र शुद्ध हुन पुग्दछ तथापि तपाईको यो प्रश्न लोकहितका निमित्त अति नै सुंदर छ । वैशाख मासमा जुन एकादशी पर्दछ त्यसको नाम मोहिनी एकादशी हो । यस एकादशीको व्रत गर्नाले मनुष्य सबै पाप तथा दु:खबाट छुटेर मोह जालबाट मुक्त हुन जान्छ । अत: यो व्रत दु:खी मनुष्यले अवश्य गर्नु पर्दछ । यस बाट मनुष्यका सबै पाप र दु:ख नष्ट हुन्छन । अब तपाई यस व्रतको कथा ध्यानपूर्वक सुन्नुहवस् ।
सरस्वती नदीको किनारमा भद्रावती नामक एउटा नगरी थियो, त्यहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य गर्दथे । यसै नगरीमा धन-धान्यद्वारा पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एउटा वैश्य पनि बस्दथ्यो । त्यो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णुभक्त थियो। उसले नगरमा अनेक भोजनालय, धारा, कुवा, सरोवर, धर्मशाला आदि निर्माण गरेको थियो र सड़कमा आप, जामुन, नीम आदिका अनेक वृक्ष रोपेको थियो । त्यस वैश्यका पाँच पुत्र थिए – सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति र धृष्टबुद्धि। यी मध्ये धृष्टबुद्धि नामको कान्छो छोरो महापापी थियो । ऊ पितृ आदिलाई मान्दैनथ्यो। ऊ वेश्या र दुराचारी मनुष्यको संगतिमा रहेर जुवा खेल्थ्यो तथा पर-स्त्रिका साथ भोगविलास गर्थ्यो, मासु-मदिराको सेवन गर्थ्यो । अरुअरु अनेक कुकर्ममा ऊ आफ्ना पिताको धन नष्ट गर्दथ्यो । वेश्याहरूसित अङ्गालो हाली घुमफिर गर्दथ्यो ।
यिनै कारणले उसका पिता, दाजुभाइ तथा कुटुम्बहरूले उसलाई घरबाट निकाली दिए र उसको निंदा गर्न थाले । घरबाट निष्काशनपछि ऊ आफ्ना गहना र कपडा बेचेर निर्वाह गर्न थाल्यो । जब संपूर्ण धन नष्ट भयो त्यसपछि वेश्या र दुष्ट संगी-साथीहरूले पनि उसको साथ छोडे । अब ऊ भोक र प्यासबाट अत्यंत दु:खी हुन थाल्यो र कुनै अर्को सहारा न भेटेर ऊ चोरी गर्न थाल्यो । एक पटक ऊ समातियो तर राज्य कर्मचारीहरूले उसलाई इमानदार वैश्यको छोरो ठानेर थुना मुक्त गरे। तर जब अर्को पटक त्यो पुनः पकड़ाउ पर्यो, उसलाई राजासमक्ष उपस्थित गराईयो । राजाले उसलाई कारागारमा बंद राख्ने आदेश दिये । कारागारमा उसले असाध्यै दु:ख पायो र त्यसपछि उसलाई देश निकाला गरीयो । ऊ शहर बाट बाहिरियो र वनमा गयो र वनमा पशु-पक्षीलाई मारेर खान थाल्यो । केही समय पछि ऊ शिकारी बन्यो र धनुष-बाण लिएर पशु-पक्षीलाई मारी-मारी खान थाल्यो ।
एक दिन ऊ भोक र प्यासबाट आक्रान्त भई आहाराको खोजीमा घुम्दै गर्दा कौडिन्य ऋषिको आश्रममा पुग्यो। त्यस समय वैशाख महिना चल्दै थियो र कौडिन्य ऋषि गंगा स्नान गरी फर्कदै थिए । उनको भिजेका लुगाको छिँटा पर्नाले उसलाई केही सद्बुद्धि प्राप्त भयो र ऊ मुनिसमक्ष हात जोडेर भन्न थाल्यो – हे मुने ! मैले आफ्नो जीवनमा धेरै ठूला ठूला पापकर्म गरेको छु तपाईले ती पापहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सरल र साधारण अनि धनको अभावमा पनि संपन्न गर्ण सकिने उपाय बताउनु हवस् । त्यसका दीन वचन सुनेर ऋषिले भन्नुभयो – तिमी वैशाख शुक्ल एकादशीको व्रत गर । यस एकादशीको नाम मोहिनी हो र यसबाट तिम्रा संपूर्ण पाप नष्ट हुनेछन । मुनिका वचन सुनेर ऊ अत्यंत प्रसन्न भयो र ऋषिद्वारा बताइएको विधिअनुसार उसले मोहिनी एकादशीको व्रत गर्यो । हे राम! यस व्रतको प्रभावबाट उसका सबै पाप नष्ट भए र अंतमा ऊ गरुड़मा चढेर विष्णुलोक गयो । यस व्रतबाट मोह आदि संपूर्ण बन्धनहरू नष्ट हुन पुग्छन । संसारमा यस व्रतभन्दा श्रेष्ठ अन्य कुनै व्रत छैन । यसको माहात्म्य पढ़दा अथवा सुन्दा एक हजार गौदानको फल प्राप्त हुन्छ ।